Admin, Author at नेपाल दृष्टि
एजेन्सी, ६ चैत । संसारका धेरै ठाउँहरु खडेरीसँग जुझिरहेको समयमा इटलीका एक आर्किटेक्चरले हावाबाट पानी बनाउने नयाँ प्रविधिको आविष्कार गरेका छन् । ‘आकाश अमृत’ नामको त्यस उपकरणले पानीको समस्याबाट बाहिर आउन सहयोग पुर्‍याउने बताइएको छ ।अफ्रिकाको इथियोपिया गाउँमा पानीको ठूलो अभाव थियो । मानिसहरु पानी लिन धेरै टाढा पुग्ने गर्थे । तर अहिले ‘आर्किटेक्चर एण्ड विजन’ को टोलीले त्यस क्षेत्र वरपरका हावाहरुलाई बटुलेर पानी पार्ने उपकरण आविष्कार गरेपछि ती बासिन्दाहरुले राहत पाएका छन् । यो विश्वास गर्न कठिन छ तर यो वास्तविक हो । इटलीका आर्किटेक्चर आर्तुरो विटोरीले बासको टावरको त्यस आकाश अमृत नामको उपकरण बनाएका हुन् । ३० फुट अग्लो टावर ती प्रत्येक गाउँहरुमा छन् जहाँ पानीको अभाव छ । उक्त टावरमा विशेष किसिमको एउटा कपडा प्रयोग गरिएको छ जसले प्रत्येक दिन वरपरको हावाको ओसिलोपनालाई सोसेर दैनिक करिब एक सय लिटर पान
एजेन्सी । उनीहरुले सधैँ स्कर्ट लगाउन मन गरे र गुडिया खेलाउने बानी बसाए। तर कसैलाई पनि आफ्नो लैंगिक समस्याका विषयमा कति समस्या छ भनेर देखाएनन्। ओ हेरलिहाई दाजुभाइले अहिले मुख खोलेका छन्। अब महिलाजसरी बस्ने आफ्नो पुरानो इच्छा सार्वजनिक गरेका छन्। दाइ जेमी २३ वर्षका भए र भाइ चोली २० वर्षका छन्। उनीहरु महिला बनेर जिउन चाहन्छन् र यसका लागि एकअर्कालाई सहयोग गर्छन्।भाइ चोलीले दाइ जेमीलाई आफू पनि महिला बनेर बस्न रुचाउने बताएपछि उनीहरुले एक भएको महसुस गरे। आयरल्यान्डको डुब्लिनस्थित एक बारमा काम गर्दै आएका जेमी भन्छन्, ‘मलाई उसको रुचि सुनेपछि हिम्मत र साहस आयो। हामी बच्चैदेखि एकसाथ थियौँ, तर दुवैको रुचि महिला बन्नुछ भन्ने एकअर्कालाई थाहा थिएन।’ उनी एकअर्काबाट प्रभावित भएका मान्दैनन्। ‘मलाई लाग्दैन कि मेरो व्यवहारले उसलाई प्रभावित गर्यो। बरु हामी जन्मँदै यस्तो व्यवहार लिएर जन्मिएका थियौँ। चोली
महेन्द्रनगर, धनुषा, ६ चैत । बाह्र वर्षदेखि साउदीको कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका धनुषाका उमेश यादव आफ्नो आमालाई कहिलेकाहीँ फोनमा कुरा गर्दा भन्छन्, ‘म छिट्टै घर आउँछु आमा, छिट्टै आउँछु ।’ १०–१५ सेकेण्डभन्दा बढी कुरा हुन्न फोनमा ।साउदी अरेबिया अदालतले टाउको काटेर २४ घण्टासम्म झुण्ड्याउने आदेश गरिसकेको छ तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । एक पाकिस्तानी व्यक्तिको हत्या गरेको आरोपमा उनलाई साउदीमा विगत १२ वर्षदेखि बन्दी बनाएर कारागारभित्रै राखिएको छ ।धनुषाको साविक माची झिटकैया–४ तथा हाल कमला नगरपालिका–३ बस्ने आमा कुमारी देवी र बुबा भोला यादवको साइला सन्तान हुन् उमेश यादव । गरिबीबाट मुक्त हुन विदेशिएका उमेशले साउदीको जिलादीन कम्पनीमा छ महिना काम गरे । त्यसपछि यो दुर्घटना हुन पुग्यो पाकिस्तानी कामदारको हत्या । उमेशका भाइ दिनेश पनि साउदीमै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका बेला उमेशबाट यस्तो घटना भएपछि
काठमाडौं, चैत ६ । आज दिन र रात बराबर हुने भएको छ । सूर्य भु–मध्यरेखाको ठिक माथि पर्ने भएकाले दिन र रातको समय बराबर हुने भएको हो । ज्योतिष शास्त्रमा यसलाई ‘मेष विषुवत्’ भनिने ज्योतिषी डा. सुनिल सिटौलाले बताए । ज्योतिष शास्त्रअनुसार सूर्यको किरण पृथ्वीमा पर्ने चारवटा भौगोलिक दिनमध्ये एक मेष विषुवत् दिन हो । आज पृथ्वीको ध्रुवी क्षेत्रवाहेक अन्य सबैतिर दिन र रात बराबर हुन्छ । भोलिबाट उत्तरी गोलार्द्धमा रातभन्दा दिन लामो र दक्षिणी गोलार्द्धमा दिनभन्दा रात लामो हुन थाल्छ । सूर्यको किरण पृथ्वीमा पर्ने चार भौगोलिक दिनहरुमा मेष विषुवत, दक्षिणयन आरम्भ, तुला विषुवत र उत्तरायण आरम्भ हुने दिनहरु पर्दछन् । जसलाई आधार मानेर राशिचक्र गणना र ऋतु परिवर्तन हुने गर्दछ ।
एजेन्सी, ६ चैत । कतिपयको आँखाको तल्लो भागमा कालो धब्बा र घेरा बस्छ । ‘कालो धब्बा आफैमा छालाको रंग होइन, बरु रगत र पानीको प्रवाहको कम हो,’ छाला विज्ञ जस्टिन हेक्सटल भन्छिन् । दिनमा यस्ता धब्बा अझै स्पष्ट देखिन्छ ।सुख्खा हुँदा यस्तो धब्बा झनै देखिन्छ । ‘जब तपाईको शरिर सुख्खा हुन्छ वा शरिरमा पानीको मात्रा न्यून हुन्छ छालाको आधारभूत पत्र अर्थात् डर्मिसमा रगत र पानीको प्रवाह न्यून हुन्छ । अनि भित्री छाला प्रष्ट रुपमा कालो देखिन्छ’, उनी भन्छिन् । तपाईँले अघिल्लो रात सुख्खा खानेकुरा खानुभएको छ वा पानी कम पिउनुभएको छ भने पनि भोलिपल्ट बिहान आँखाको तल्लो भागमा घेरा पर्नेदेखि कालो धब्बासम्म हुन्छ । अझ साँझ पख कफी खानुभएको छ भने त यसको स्ष्ट असर भोलि बिहान आँखामा देख्नुहुन्छ । कफीले आँखाको नरम छालाको पानी विस्तारै सोसिदिन्छ र छाला कालो हुन्छ । यदि तपाईँ एसी वा ताप दिने कोठामा हुनुहुन्छ भने त यसको अ
झापामा बेहुली छाडेर बेहुलो भाग्दा ३५ लाख रुपैंया जरिवाना
झापा, चैत ६ कस्का बुबा आमाले सोचेको हुन्छ छोराको विवाह गर्दा रु ३५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्छ भनेर तर झापामा भइदियो यस्तै । दश महिना अघि टिकाटालो गरेर गत फागुन २० गते धुमधामका साथ विवाह गरेका बुद्धशान्ति गाउँपालिका–१ का २९ वर्षीय राकेश रेग्मी विवाहको भोलिपल्टै बेहुली छाडेर फरार भएपछि उनका बुबा लालप्रसाद रेग्मीले बेहुली फिर्ता गर्दै रु ३५ लाख जरिवाना तिर्नुभएको छ । बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको न्यायिक इजलासमा दुई दिनसम्म भएको बहसपछि रेग्मीले बेहुलीका लागि भरणपोषण र पढाइ खर्चबापत सो रकम दिने सहमति भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मीरा भुर्तेलले जानकारी दिनुभयो । राकेशले सोही ठाउँ निवासी २१ वर्षीया एक युवतीसँग सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह गरेका थिए । विवाहको भोलिपल्ट बेहुला र बेहुलीका आमाबुबाबीच सम्धी ढोकभेट कार्यक्रम पनि भएको थियो । सम्धी ढोकभेट सकिएपछि राकेश बेहुली छाडेर बेपत्ता भएका थिए । बेपत्ता भएक
सिरहामा व्रह्मचारी बनेका माओवादी पूर्वलडाकु, हिसिला यमीलाई भेटेपछि किन रोए ?
सिरहा । माओवादी युद्धका थुप्रै सेना शान्ति प्रक्रियासँगै तितरबितर भए । कोही विदेशिए । कोही व्यवसाय गर्दै बसे । कोही कृषि कर्ममा ।जनसत्ता स्थापना गर्ने सपना बोकेर हिँडेका ती अधिकांश योद्धा आफ्नो बिगत बिर्सन चाहन्छन् । तीमध्ये हजारौंको संख्यामा पूर्व लडाकुहरु नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीमा आबद्ध छन् ।१० वर्षे युद्धमा सक्रिय भएकाहरुले अर्को क्रान्ति गर्ने सपना बोक्नु अनौठो भएन । परिवारको खुसीका लागि विदेशमा गएर श्रम गर्नु नौलो भएन । व्यवसाय गर्दै बस्नु वा कृषि कर्ममा लाग्नु पनि स्वभाविक नै हो ।तर सिरहामा त्यस्ता पूर्व लडाकु भेटिए जो अहिले जोगीको रुपमा व्रह्मचारी जीवन बाँचिरहेका छन् । युद्धको अवधिमा प्लाटून कमान्डरको रुपमा पूर्वी नेपालमा सक्रिय राम परिक्षण साफी अहिले व्रह्मचारी जीवन भोगिरहेका छन् । साफीकै नेताको रुमपा रहेकी तत्कालिन सहयोद्धा तथा नयाँ शक्ति नेपालकी नेत्री
१, परिक्षमले लक्ष्य प्राप्ती हुन्छ, इच्छाले मात्र हुदैन । के सुतेको बाघको मुखमा मृग आफै पस्छ र । – हितोपदेश २, परिश्राले नै प्रतिभामा निखारता ल्याउँछ । – हितोपदेश ३, सवैभन्दा उत्तम मानिस त्यही हो, जो प्रगतिका लागि अधिक परिश्रम गर्छ । – सुकरात ४, विना परिश्रम संसारमा कूनैपनि मुल्यवान बस्तु पाईदैन । – एडिसन ५, परिश्रम त्यो साँचो हो जसले भाग्यको ढोका खोल्दछ । – चाणक्य ६, परिश्रमले लाभ मिल्दछ तर व्यर्थको फतफतले गरिवी निम्त्याउँछ । – बाइबल ७, नवयु्वाहरुलाई तिन शव्दमा मेरो सन्देश छ – परिश्रम, परिश्रम र परिश्रम । – विस्मार्क ८, निन्द्रालाई माया नगर आँखा खोलेर परिश्रम गर तिमी कहिल्लै भोकै मर्दैनौं । – बाईबल ९, निरन्तर परिश्रम तथा साहस सफलताको साँचो हो । – सेम्युयल स्माइल्स १०, परिश्रमी व्यक्तिका लागि निन्द्रा मिठो हुन्छ । – बाइबल
दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका युएस–बंगला विमानका क्याप्टेन अबिद सुल्तानकी पत्नीलाई हृदयघात
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका युएस–बंगला विमानका क्याप्टेन अबिद सुल्तानकी पत्नीलाई हृदयघात भएको छ । हृदयघातपछि उनी अस्पतालमा ‘लाइफ सपोर्ट’ मा रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । आइतबार बिहान ४ बजेतिर अफसना खानमलाई आफ्नै निवासमा हृदयघात भएको थियो । त्यसपछि उनलाई नेसनल इन्स्टिच्युट अफ न्युरोसाइन्स एन्ड हस्पिटलमा भर्ना गरिएको छ । त्यसयता आज बिहान ४ बजे उनको दोस्रो शल्यक्रिया सम्पन्न भएको चिकित्सकलाई उधृत गर्दै द डेली स्टारले जनाएको छ । शल्यक्रियापछि उनी कोमामा छिन् । उनको दिमागको देब्रे हिस्सामा धेरै ओटा रगतको थेग्ला जमेको छ ।५१ जनाको ज्यान जानेगरी भएको सो दुर्घटनामा २६ बंगलादेशी नागरिकको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु भएकामध्ये शवको सनाखत भएका २६ जनालाई आज बंगलादेश लगिँदैछ ।